कालो भान्सा, व्यक्तित्व संग एक प्रवृत्ति | बेजिया
कालो भान्सा, व्यक्तित्व संग एक प्रवृत्ति
मारिया vazquez | 26/11/2021 18:00 | फर्नीचर
के तपाई आफ्नो भान्सा परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? के तपाईंले कालोमा भान्साकोठामा सट्टेबाजी गर्ने विचार गर्नुभएको छ? कालो एक बढ्दो प्रवृत्ति हो हाल भान्सामा। केहि समय पहिले यो रंग संग केहि हिम्मत गरे, तर खुला ठाउँ को वृद्धि संग, कालो भान्सा व्यक्तित्व संग एक विकल्प बनेको छ।
एक कालो भान्सा यसको भारी व्यक्तित्वको लागि मात्र होइन तर यसको लागि पनि बाहिर खडा छ avant-garde सौंदर्यशास्त्र। यो साँचो हो कि यस रङलाई प्रचुर मात्रामा उज्यालोको साथ ठूलो ठाउँ चाहिन्छ, तर हामीले यो रङ त्याग्नु हुँदैन किनभने ती आवश्यकताहरू मध्ये केही असफल भए जस्तै तपाईंले तल देख्नुहुनेछ।
1 कालोमा कालो
2 अन्य रंगहरूमा सूक्ष्मताहरू
के तपाई कालो भान्सा चाहनुहुन्छ? यदि वर्ग फुटेज समस्या छैन त्यसको बारेमा सोच्नुहोस्! कालोले भान्सालाई शहरी र आधुनिक हावा दिनेछ, ठूला खुला ठाउँहरूमा व्यक्तित्व थप्नको लागि उपयुक्त छ जुन पहिले अविस्मरणीय थियो।
यस प्रकारको भान्सा चम्कनेछ विशेष गरी यदि तपाइँ शर्त लगाउनुहुन्छ म्याट टोन मा फर्नीचर। कस्तो विरोधाभास, हैन? यी टोनहरू हाल न्यूनतम ठाउँहरू सिर्जना गर्न रुचाइएका छन् जसमा फर्नीचर यसको स्पष्ट सरलताको लागि बाहिर खडा छ र विद्युतीय उपकरणहरू तिनीहरूमा एकीकृत छन् वा यो रङमा डिजाइन गरिएका छन्।
के कालो भान्साहरू ठूला ठाउँहरूको लागि मात्र हुन्? पटक्कै होइन, तिनीहरूले तपाईंलाई के भनेका छन् बिर्सनुहोस्! यदि तपाईंसँग एक छ भने पनि सानो भान्छा तपाईं यो रंग मा शर्त गर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईंले गर्नुपर्नेछ ठाउँ उज्यालो छत र भित्ताहरू सेतो रंग गर्ने, हल्का भुइँमा बाजी लगाउने र अग्लो क्याबिनेटहरू राख्नबाट जोगिन। कालो क्याबिनेटहरू नेत्रहीन रूपमा धेरै भारी छन् र तिनीहरू बिना गरेर तपाईं कोठालाई हल्का बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
अन्य रंगहरूमा सूक्ष्मताहरू
कुल कालो मा शर्त गर्न विश्वस्त हुनुहुन्न? यदि त्यहाँ कालोको बारेमा केहि राम्रो छ, यो त्यो हो यो सबै कुरा संग मिल्छ। अपडेट गरिएको क्लासिक ठाउँको लागि अन्य सेतोसँग कालो फर्निचर जोडा। आधुनिकता ल्याउन खैरोको लागि जानुहोस् वा थप स्वागत ठाउँको लागि काठ टोनहरूसँग कालो कन्ट्रास्ट गर्नुहोस्।
खेल जसले ए ल्याउँछ क्लासिक नस संगमरमर कालो भान्छामा यो शानदार छ। यसलाई क्लासिक तर अपडेट गरिएको ठाउँको लागि किचन अगाडि र काउन्टरटपमा समावेश गर्नुहोस्। कालो भान्साको वर्चस्व तोड्ने यो मात्र स्रोत होइन। तपाईं तल्लो फर्निचर वा सेतो टापुमा पनि शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ। र साना विवरणहरूको बारेमा नबिर्सनुहोस्; सुनौलो टोनमा केही उच्चारणहरू सबैभन्दा सफल हुन्छन् जब तपाईंको भान्साको कालोमा लुगा लगाउँछन्।
यदि तपाईं एक avant-garde भान्साको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कालो र खैरो संयोजन गलत हुनेछैन। पछिल्लो दशकमा खैरो भन्दा बढी पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको रङ छ? संगमरमर र अन्य ढुङ्गाहरू तिनीहरू कालो भान्साकोठामा परिचय गराउनको लागि उत्कृष्ट स्रोत हुन्, तर कंक्रीट पनि हो। पहिलेको भान्साकोठामा ठूलो परिष्कार ल्याउनेछ, जबकि कंक्रीटले यसमा एक अद्वितीय avant-garde र औद्योगिक स्पर्श छाप्नेछ।
अर्को ठूलो स्रोत जसले भान्साकोठालाई उज्यालो बनाउन पनि मद्दत गर्दछ कालो फर्निचरलाई अरूसँग संयोजन गर्नु हो। खैरो रंगको छायाहरू, तिनीहरूलाई शीर्षमा राख्दै। न्यूनतम सौन्दर्यता भएको फर्निचर छनोट गर्नुहोस् र क्वार्ट्ज वा सिरेमिक जस्ता विभिन्न सामग्रीहरू समावेश गरेर भान्साकोठामा समृद्धि थप्नुहोस्।
भान्साकोठा जस्तो पारिवारिक ठाउँको लागि कालो धेरै चिसो रङ जस्तो देखिन्छ? काठले तपाईंलाई यसलाई सहज बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। काठ र कालो रङ दुवैमा उत्कृष्ट सजावटी शक्ति हुन्छ, तर संयुक्त रूपमा तिनीहरू एकअर्कालाई पूर्ण रूपमा पूरक हुन्छन्, परिष्कृत र न्यानो सौन्दर्य।
त्यहाँ धेरै प्रकारका काठहरू छन् र हालसालै तिनीहरू हल्का काठहरू हुन्, नॉर्डिक शैलीका विशेषताहरू, जसलाई हामीले कालो भान्सा पूरा गर्ने प्रस्ताव गरेका होइनौं। मध्यम र गाढा टोनमा वुड्स तिनीहरू कालो भान्साको लागि धेरै उपयुक्त देखिन्छन्।
कालो र मा आधार क्याबिनेट काठको माथिल्लो क्याबिनेटहरू यो एक ट्यान्डम हो जसको साथ तपाईं गलत हुन सक्नुहुन्न, तर त्यहाँ अन्य थप वर्तमान र जोखिमपूर्ण विकल्पहरू छन्। माथिको छवि हेर्नुहोस्; माथिल्लो क्षेत्रमा दुबै रङका मोड्युलहरू संयोजन गर्ने वा अगाडि र भान्साको टापुको लागि कालो आरक्षित काठको फर्नीचरको लागि छनौट गर्नु उत्कृष्ट विकल्पहरू हुन्।
के तपाइँ कालो भान्सा मनपर्छ? के तपाइँ यो रंग संग हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » कालो भान्सा, व्यक्तित्व संग एक प्रवृत्ति
किशोरकिशोरीले यौन सम्बन्धमा जान्नै पर्ने ५ कुरा
भिटामिन र खनिज जसले मेमोरी र एकाग्रता बढाउँछ